आदित्यपुराणका अनुसार आफ्ना श्राद्ध नगर्ने सन्तानको पितृले रगत पिउँदछन् श्राद्ध सबैले गर्नुस् « Sanatan Online
प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:४५
चान्द्रमान अनुसार एक वर्षमा २४ पक्ष रहेका हुन्छन् । यिनै २४ पक्षमध्ये आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा सोह्र श्राद्ध भनिन्छ । एक पक्षमा पन्ध्र तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन औँशीसम्मका सोह्र तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यस समयमा गरिने श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो । यसलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ ।श्राद्धको समयको कुरा गर्ने हो भने पार्वण श्राद्ध खासगरीकन अपराह्नमा गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेखित छ । श्राद्ध भनेको के हो ? यो किन गरिन्छ ? श्राद्ध कहिले र कसरी गर्नुपर्छ ? यी कुराहरूमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न नसके पनि सामान्य जानकारी लिई व्यावहारिक रूपमा आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नु अति जरुरी हुन्छ ।
श्राद्ध भन्नाले सामान्य अर्थमा बुझ्दा आआफ्नो गच्छेअनुसार श्रद्धाका साथ गरिने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यसमा यति नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ‘श्रद्धया क्रियतेयत्र त च्छाद्धं परिकीर्तितम्’ अर्थात् पितृका लागि जो कार्य गरिन्छ, त्यसलाई नै श्राद्ध भनिन्छ । ‘देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्’ ।
भनिएको पनि छ, ‘पितरो वाक्य मिच्छरिन्त भाव मिच्छन्ति देवता’ अर्थात् पितृहरूलाई शुद्ध मन्त्र शुद्ध वाक्य चाहिन्छ भने देवताहरूलाई भाव भए पुग्छ । श्राद्धकल्पका अनुसार पनि प्रेत र पितृलाई आफूलाई मनपर्ने वस्तु श्रद्धाले दिनु नै श्राद्ध हो । यस प्रकार आफ्ना पितृहरूको मृत तिथिमा गरिने पितृ यज्ञलाई श्राद्ध भनिन्छ । हाम्रो धार्मिक शास्त्रमा श्राद्ध धेरै किसिमका छन् ।मत्स्य पुराणमा तिन प्रकारको श्राद्धको उल्लेख गरिएको छ । नित्य, नैमीत्तिक र काम्य श्राद्ध । यमस्मृतीले पाँचप्रकारको श्राद्धको महिमा बताएको छ । जहाँ बृद्धि र पार्वण श्राद्ध थपिएको छ । हरेक दिन गरिने श्राद्धलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ भने एकोदिष्ट श्राद्धलाई नै नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ । कुनै कार्य सिद्धिका लागि गरिने श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भनिन्छ । यहाँ बिभिन्न पूजा तथा विवाह एवं ब्रतवन्ध सप्ताहको पूर्वाङ्गमा गरिने श्राद्ध नै काम्य श्राद्ध हो जहाँ अनुष्ठान गर्न लागिएको कामनायुक्त कर्म पूरा होस भन्ने कामना सहित पितृको स्मरण तथा जल भोजन पिण्ड अर्पण गरिन्छ । सन्तानोत्पत्तीमा गरिने श्राद्ध नै बृद्धिश्राद्ध हो यसमा अझबढी सन्तान बृद्धिको कामना गरेर पितृको पूजा गरिन्छ ।
भविष्य पुराणमा बाह्र प्रकारको श्राद्धको बयान गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएको श्राद्ध बाहेक सपिण्डिकरण श्राद्ध, गोष्ठिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, शुध्यर्थ श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध, पुष्टि श्राद्धको बयान गरिएको छ ।
सबैप्रकारको श्राद्ध श्रौत र स्मार्त भेदले दुई प्रकारको हुन्छ । पिण्डपितृयागलाई नै श्रौतश्राद्ध भनिन्छ । पिण्डपितृयाग औंशिका दिनमा मात्र हुन्छ र यो कर्म गर्नका लागि अधिकारी केवल अग्निहोत्री मात्र हुन्छन् । यसमा श्रुतीद्वारा प्रतिपादित मन्त्र मात्र प्रयोग गरिन्छ । एकोतिष्ट, पार्वण, तथा तीर्थश्राद्धदेखि मरणसम्मको श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध हो । यस श्राद्धविधिमा बैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक, तथा धर्मशास्त्रादि मन्त्रको प्रयोग गरिन्छ ।
महर्षि जावालिका अनुसार पितृपक्षमा श्राद्ध गर्नाले पुत्र, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा इच्छा गरिएका बस्तुहरु प्राप्त हुनेकुरा उल्लेख छ । जो मानिस पितृपक्षमा आफ्ना पितृको श्राद्ध गर्दैन उसलाई पितृले श्राप दिनेकुरा महर्षि कर्णादले बताएका छन् । कन्याराशि पछि बृश्चिक राशि नआउन्जेल वा पितृपक्षमा पितृगणले श्रद्धा नपाएमा वा सन्तानद्वारा दिइने भोजन नपाएमा उनीहरु निरास भएर लामो लामो श्वास लिन्छन र त्यसले गृहस्थलाई दुखदायि श्राप दिएर पुन पितृलोक फर्कन्छन् । विदूरनीतिमा पनि यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । “जसले श्राद्धको महिमा नबुझेर श्राद्ध गर्दैन त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ ।” संसारमा त्यो जस्तो पापिष्ट, मूर्ख अरु कोही हुँदैन जो आफ्ना पितृगणको श्राद्ध गर्दैन ।” आदित्यपुराणका अनुसार “आफ्ना पितृगणको श्राद्ध नगर्ने सन्तानको पितृले रगत पिउँदछन् ।” त्यसैले आफ्नो कल्याणका लागि पनि श्राद्धगर्नु अति आवश्यक मानिन्छ । महर्षि सुमन्तुका अनुसार “श्राद्धदेखि बाहेक दोस्रो कल्याणकारी अर्को कुनै कार्य वा मार्ग हुनसक्दैन ।” त्यसैले बुद्धिमान मानिसले राम्रो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्दछ ।